Izinhlangano zivame ukusebenzisa amafayili e-vector anamalayisense futhi atholakala kumasayithi ezithombe zesitoko. Inselelo iza lapho befuna ukuvuselela ezinye izibambiso ngaphakathi kwenhlangano ukufanisa isitayela nokubeka uphawu okuhambisana nezithonjana noma izimpawu ezazikhishwe ngaphambilini. Ngezinye izikhathi, lokhu kungabangelwa yinzuzo futhi… kwesinye isikhathi abaklami abasha noma izinsizakusebenza ze-ejensi zithatha imizamo yokuqukethwe nokuklama ngenhlangano. Lokhu kusanda kwenzeka nathi njengoba siqale ukusebenza
Sekuyiminyaka ngijwayela uku poo-poo umqondo wokubeka uphawu kophawu. Isixuku sabantu abathintekayo abanenhlonipho abaphikisana ngombala oluhlaza ku-logo sibonakala siyisidina kimi. Kanjalo nethegi lentengo lama-ejensi wokubeka uphawu abiza amashumi noma ngisho namakhulu ezinkulungwane zamaRandi. Isizinda sami sikubunjiniyela. Ukuphela kwekhodi yombala engangiyikhathalela kwakuwukufaka intambo ndawonye. Umsebenzi wami kwakuwukuxazulula inkinga okwakonakele bese ngiyakulungisa.
Enye indawo engingazange ngitshale imali ukuyifaka uphawu yileli sayithi. Ngenkathi i-ejensi yami yayinophawu olukhulu engiluthandayo, futhi sisebenza nawo wonke amaklayenti ethu ekubekeni uphawu lwawo, bengingenawo nje umkhawulokudonsa wokusebenza Martech Zone sha… kuze kube namuhla. Uphawu oludala oluthi “M” ngokuyisisekelo lwalungumfanekiso olungiswe kancane engiwuthenge ngokuxhamazela ngemuva kokushintsha isizinda. Bekucacile impela, bekungamele lutho, futhi
Abangane bami bayathanda ukunginikeza isikhathi esinzima sokuba umlandeli we-Apple onjalo. Ngingakusola ngobuqotho konke kumngane omuhle, uBill Dawson, owangithengela idivayisi yami yokuqala ye-Apple - i-AppleTV… wabe esesebenza nami enkampanini lapho sasingabaphathi bemikhiqizo bokuqala ukusebenzisa iMacBook Pros. Bengingumlandeli kusukela manje futhi manje, ngaphandle kwe-Homepod ne-Airport, nginayo yonke into eyodwa.